बिहान उठ्ने बित्तिकै के गर्ने के नगर्ने ? जान्नुहोस् - अभियान खबर
बिहान उठ्ने बित्तिकै के गर्ने के नगर्ने ? जान्नुहोस्
सामान्‍यतया मानिसहरु आफ्नो दैनिकी अनदेखा गरिरहेका हुन्छन् जसले उसको जीवन शैली नै खतरामा पर्न जान्छ। हामी हरेक दिन निदाउँछौं। बिछ्यौनामा पल्टिन्छौ र बिहानी पख उठ्छौँ।विशेषत: विहान जब तपाइको आँखा खुल्छ, तब के गर्नु हुन्छ त ? प्रत्‍येक बिहान उठ्दा भुलेर पनि यी काम नगर्न एस्ट्रोलोजर प्रेम शर्मा सुझाव दिन्छन्।
के नगर्ने, गर्ने के ?
१. बिहान ढिलासम्‍म नसुत्नुस्। ब्रम्हमू्र्तको समयमा उठ्नुस्। सूर्य उदाउनु अगाडि उठ्नु अत्याधिक राम्रो हुन्छ।
२.बिहान उठ्ने बित्तिकै बादविवाद गर्ने काम नगर्नुस्। मोबाइलबाट कुरा नगर्नुस्। त्‍यही अनुसार तपाईँको दिनको सुरुवात हुन्छ।
३.बिहान बिहान कसैमाथि रिस नदेखाउनुस्। कसैले काम बिगारेको छ भने नम्र भएर/सकारात्मक भएर सम्झाउने गर्नुस्।अपशब्द बोल्दै नबोल्नुस्।
४. बिहान बिछ्यौनामै पल्टेर टीभी हेर्ने बानी छ। अझ आजकाल त मोबाइल हेर्ने बानी चलेको छ। एउटा आँखालाई पनि घाटा छ भने बिहानै सामाजिक सञ्‍जाल वा च्‍यानलहरुले नेगेटिभ प्रभावहरु पारिरहेको हुन्छ। हत्‍या,हिंसा, बलात्कार वा अन्‍य जघन्‍य अपराधका समाचारले दिनको खराब सुरुवात हुन जान्छ। मोबाइल र टेलिभिजनमा बिहानै खराब सन्देश र समाचार नसुन्‍नुस्।
५. बिहान उठ्ने बित्तिकै ऐना नहेर्नु होला। धेरैको प्राय यही बानी छ। यसले तपाइको शरीरमा धेरै मात्रामा नेगेटिभ ऊर्जा, रोगको सम्भावना र भयको सम्भावना बढी शरीरमा उत्पन्‍न गराउँछ। बरु अफिस जाने समयमा वा फ्रेस भएर ऐना हेर्दा उपर्युक्त हुन्छ।
७.जनावरहरुको तस्बिर/फोटो रुममा राख्नु भएको छ भने कृपया हेरेर बस्ने काम नगर्नुस्। शास्त्रीय ढंगले जनावरहरुको तस्बिर हेर्न उचित मानिएको छैन बिहान बिहान।
८. दूध हालेको चिया खाँदै नखानुस्। यसले ग्‍यास्ट्रिक, ग्यास्ट्रिकले अल्सर अलसरले क्‍यान्सर हुन सक्छ। आजकाल त अझ बेड टी अर्थात ओछ्याउनमै चिया खाने धेरैको बानी हुन्छ। यो काम बन्द गर्नुस्। बरु बिहान मनतातो पानी खानुस्।
९. मसलेदार खाना नखानुस्। खैनी चुरोट र चिया खाँदै हुनुहुन्छ भने यी कामहरु प्रयोगमा ल्‍याउँदै नल्याउनुस्। तपाइ जे खानुहुन्छ, त्‍यस्तै बन्दै जानुहुन्छ।
बिहान उठेर यस्तो गर्ने बानी गर्नुहोस
भनिन्छ दिनको संकेत विहानले देखाउँछ । त्यसैले बिहान राम्रो काम गर्यो भने त्यो दिन निकै उत्तम रहने शास्त्रमा उल्लेख छ । दिनभरको काम शुभ बनाउन विहान केही काम अनिवार्य गर्न जुरुरी रहेको शास्त्रमा उल्लेख छ । विहान त्यस्ता कामले गर्दा तपाईको दिन शुभ रहने र आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने विश्वास गरिदै आएको छ।
३.गाईलाई रोटी ख्वाउनुहोस् सक्नु हुन्छ भने बिहान खाना बनाउने समयमा पहिलो रोटी गाईलाई ख्वाउनुहोस् । हर दिन गाईलाई रोटी ख्वाउन सकियो भने कयौ समस्याहरू हट्दै जाने विश्वास छ । घरमा अन्न र धनको कमी हुन पाउँदैन भनिन्छ ।
४. योग एवं ध्यान गर्नुहोस् लामो समय सम्म स्वस्थ रहन र शरीरलाई पूmर्तिलो बनाइ राख्नको लागि सर्वश्रेष्ठ उपाय भनेको योगा हो। योगाले शरीरलाई धेरै किसिमका विमारीहरुबाट बचाउँछ। मानसिक स्थितिमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । ध्यानले क्रोधलाई नियन्त्रण गर्छ । मानसिक तनाब बाट मुक्ती दिलाउँछ । शरीरलाई रोग सँग लड्ने क्षमतामा वृद्धि गर्छ ।
बिहान उठेर कहिल्यै नगर्नुस् यि ७ काम
बिहान चाँडै उठ्नु राम्रो बानी हो । हामीमध्यये धेरै यस्ता पनि छौँ, जो बिहान उठेर पानी पिउने, मेडिटेशन गर्ने, व्यायाम गर्ने र बिहानको समय मर्निगं वाक गर्ने गछौँ । एकातिर यि सबै बानी स्वास्थ्य जीवनका लागि राम्रो हो भने अर्कोतिर केही यस्ता बानी पनि हुन्छन् जसले हाम्रो स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पर्ने हुन्छ ।
चौतर्फी दबाबपछि सरकारले सुरु गर्यो विषादी परिक्षण
Posted on July 12, 2019 Author abhiyaan
सर्वोच्च अदालतको आदेश र चौतर्फी जनदवावपछि सरकारले बिषादी परीक्षण शूरु गरेको छ । काठमाडौंको कालिमाटीदेखि भन्सार नाकामा बिषादी परीक्षण शूरु गरिएको छ । एक साताअघि भारत र तेस्रो मुलुकबाट आउने तरकारी तथा फलफुलको बिषादी परीक्षण सरकारले रोकेको थियो । बिषादी परीक्षण रोकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर भएको थियो । सडकदेखि सदन र सामाजिक सञ्जालमा […]
आजको राशिफल / वि.सं. २०७६ पौष ०७ गते सोमबार
Posted on December 23, 2019 Author abhiyaan
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – सुरुवातमा मन प्रफुल्ल रहने छ र आत्मबल बढ्नेछ । आफन्तबाट सहयोग र हौसला प्राप्त हुने छ । घरपरिवारबाट भरमग्दुर सहयोग प्राप्त हुने छ । बन्दव्यापारमा राम्रै देखिन्छ, तर ढिलो गरी कार्यसम्पादन हुने सम्भावना छ । साथीभाइ र समाजले तपाईंको भावनालाई ढिलो गरी बुझ्ने छन् […]
विप्लव माओवादीको नेपाल बन्दको प्रभाव : नुवाकोट ठप्प
Posted on May 27, 2019 May 27, 2019 Author Nirajan Abhiyaan
नुवाकोट जेठ १३, प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव माओवादीले सोमबार आह्वान गरेको नेपालबन्दको प्रभाव नुवाकोटसहित देशभर परेको छ । बन्दको कारण नुवाकोटको शैक्षिक संस्था, यातायातका साधन तथा राजमार्गहरु पुर्ण रुपमा बन्द भएको छ । नुवाकोटको दुई नगरपालिका क्षेत्रमा बम बिस्फोट भएको छ । गल्छी–त्रिशुली सडकखण्डको बेलकोटगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ कोल्पु खोला नजिकै पेट्रोल बम बिस्फोट […]
पूँजी बजारमा हस्तक्षेप गर्ने अर्थमन्त्रीको चेतावनी
रातमा खसेको पहिरोले नारायणगढ–मुग्लिन सडकअवरुद्ध, सयौं यात्रु अलपत्र